Musuq-maasuqa Wasaaradda Caafimaadka & deeqdii COVID-19 | KEYDMEDIA ONLINE
Agaasimihii guud ee wasaaradda Caafimaadka dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Xaashi Cali ayaa la xiray taariikhdu markii ay ahayd 06/April 2020, sidoo kale laba habeen kahor 04/April/2020 ayaa lasoo xiray Agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buulle, waxaana dhammaantood lagu soo eedeeyay fal la xiriira Musuq maasuq.
Muddo afar bil ah kaddib waa la xakumay saraakiishaasi ee lagu soo eedeeyay xatooyada iyadoo xabsi dhowr sano iyo in aysan xafiis dowlo ka shaqeyn karin mar dambe lagu xakumay, sidee hore Keydmedia Online usoo qortay.
Wasaaradda ayaa si toosa waxaa u soo gaartay lacagihii gargaarka ee loogu talagalay Caabuqa COVID19 ee adduunka oo dhan saameynta ku yeeshay iyo sidoo kale lacago loogu talagalay caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka, Malaariyada, HIV -ga, iyo Kobcinta Wacyi-gelinta Caafimaadka.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka Marwo Fowsiya Abiikar oo kamida wasiirada xiriirka dhaw la leh Farmaajo islamarkaana kasoo muuqatay markale xubnaha golaha wasiirada ee cusub ee Ra'iisulwasaare Rooble soo dhisay dhawaan ayaa xariga kaddib ka hadashay in xafiiska loogu yimid agaasimaha, waxayna dalbatay in lasii daayo, inkastoo markii dambe lagu helay falkii musuq maasuqa ahaa ee loo soo xiray Agaasimaha, waxaana gurigiisa laga helay dukumiintiyo been abuur ah oo ubadnaa qaansheegad kuwaasoo lacago loogala baxay qasnadda wasaaradda ay ku leedahay Akoonada bangiyada gaarka loo leeyahay ee magaalada muqdisho!
Wasaaradda Caafimaadku waxay leedahay koontooyin iyada u gaara oo loo soo mariyo malaayiin kaalmo dhaqaale ah, taasoo aan ahayn midda qasnadda dhexe ee dowladda soomaaliya.
Waxayna deeq bixiyayaasha caalamku ay si toosa wasaaradda usoo gaarsiiyaan lacagahaas oo loogu talagalay in wax looga qabto baahiyaha caafimaad ee bulshada soomaaliyeed. Hay’adaha kala ah United Nation Population Fund, World Vision iyo UNICEF ayey inta badan ka imaaneysay deeqda lacageed oo gaaraysa $6.1 Million oo gabi ahaanba martay halkii loogu talagalay meel aan ahayn.
Musuqa ama xatooyadan ayaa soo socotay saddexdii sano ee lasoo dhaafay, 2017-2020 ayey iska socotay qaadashada lacagaha taas oo muujineysa kor-joogteyn la’aan iyo daba-gal la’aan ka jirta xafiisyada dowladda soomaaliya. Dhacdooyinka nuucan ah ee la xiriira musuqa ayaa ah mid aan dhammaad lahayn, waana dhacdada kaliya ee musuq ah ee la qabtay intii ay dhisneed xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyayba tan iyo xilligii burburka kaddib dowladihii sameysmay!
KEYDMEDIA ONLINE Waxay qorsheeneysaa in ay sii deyso warbixin la xiriirta musuq-maasuqa ee ka jirta xafiisyada dowladda, dhawaan ayey daabacda Keydmedia Online musuq maasuq la xiriira boob lagula kacayo xilalka danjiyaraasha safaaradaha soomaaliya ee waddamo dhowra, waxaana si ulakac ah u maamulanaya wasiir saaxiib dhaw la ah Farmaajo oo qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda, sidoo kalena ka mida wasiirada aan dhicin ee lagu naas-nuujinayo xilka umadda Soomaaliyeed loo hayo.